Xayeysiinta Brand ma shaqeysaa? | Martech Zone
Axad, Janaayo 6, 2013 Douglas Karr
Miyuu shaqeeyaa xayeysiintu? Lab42 ayaa kaliya weydiistay taas oo ku dhejineysa sawirkan natiijooyinka.
Waxaan go'aansanay inaan fiirino sida macaamiisha ay u arkaan sheegashada xayeysiinta, iyo ra'yigooda ay ku xardheen sawir xiiso leh. Kaliya 3% ayaa ku tilmaami doona sheegashooyinka xayeysiinta inay yihiin kuwo aad u sax ah, kaliya 21% ayaa ku tilmaami doonta xayeysiiska xoogaa sax ah Waxaan si sax ah u ogaanay qeybaha xayeysiinta ee aysan rumeysneyn – ku dhowaad dhammaantood waxay u tilmaameen Photoshop inay yihiin cunsur xayeysiis ah. Fiiri ah infographic hoosta Lab42 fikradaha ku saabsan aragtida xayeysiiska, aragtida astaanta, iyo haddii xayeysiinta noocyadu run ahaantii shaqeeyaan.
Rumayso ama ha rumaysan, haddii xayeysiinta summaddu su'aal ka taagan tahay iyo haddii kale ay ugu dambayntii ka jawaab celiso macaamiisha iibsashada iyo in kale. Waan daawan karaa xayaysiis sheegaya in aan laba jibaari karo hogaankayga isla markaana aan wali wax iibsan karo anigoonan filayn inay dhab ahaan dhici doonaan double. Waxaa laga yaabaa, markaan aqrinayo xayeysiinta, kaliya waxaan aaminsanahay in istiraatiijiyaddu tahay mid macquul ah oo mudan in la tijaabiyo. Marka la soo koobo, aragtidayda ku aaddan xayeysiiska ayaa laga yaabaa inay ahayd mid taban, laakiin weli waan sameyn karaa iibsiga.
Dabcan, uma doodaayo beenta fidinta si aan ugu iibiyo xayeysiimahaaga. Si kastaba ha noqotee, tilmaamida tirakoobyo waaweyn, abaalmarin, natiijo aan caadi aheyn oo laga helo macmiilka ayaa ku filnaan karta in la soo jiito dareenka qof. Waa rajada aad la dejisay macmiilkaaga waa waxa muhiimka ah!
Tags: aragtida adaragtida xayeysiintaxayeysiinta sumaddainfographicshaybaarka 42Lab42aragtida
Jan 6, 2013 saacadu markay ahayd 3:51 PM
Waan jeclahay 'waxa ay tahay xayeysiintu inay sameyso' i bar, i ogeysii badeecada oo ila xiriirta…. meelna kuma qorna iiga iib!